को भाईरल, कस्ता भाईरल ? | देश परदेश Desh Paradesh
नेपाली मिति: ०८:१४:३८ मध्यान्ह २०७७ श्रावण ३१ गते, शनिबार
भिडियो / अडियो
को भाईरल, कस्ता भाईरल ?
मेघराज सापकोटा, यूएई
९ माघ २०७६, बिहीबार
चितवनका सुरेश भण्डारी (नाम परिवर्तन) वैदेशिक रोजगारीको लागि यूएई आएको १० बर्ष भयो । उनी सामान्य लेवर भिसामा काम गर्न आएका थिए । हाल उनी अफिसमा डकुमेन्ट कन्ट्रोलर बनेका छन् । बिहान ९ बजे अफिस पुग्छन् र बेलुकी ६ बजेसम्म अफिसमै ब्यस्त हुन्छन् ।
दुवईमा कार्यरत झापाका विनोद कम्पनीका सेल्सम्यान हुन् । उनी कम्पनीको गाडीमा विहान ७ बजे देखी बेलुकी ६ बजेसम्म विभिन्न सामान बेच्दै हिंड्छन । बेलुकी ७ बजे तिर आफ्नो बासस्थानमा पुग्छन् ।
यूएईमा कार्यरत धेरैको दैनिक बिहान उज्यालो भए देखी बेलुकी साँझसम्म ब्यस्त रहन्छ । बेलुकीपख कोठामा पुग्छन । दोकानतिर काम गर्ने सेल्स व्वाई वा सेल्स गर्ल्स भने विहानपख फुर्स्दिला हुन्छन भने राती एक दुई बजे तिर मात्र कोठामा पुग्दछन् । यो उनीहरुको दिनचर्या हो । दैनिक ८ घण्टा देखि ओभर टाइम भएमा बढीमा ११ घण्टासम्म उनीहरु आफ्नै काममा ब्यस्त हुन्छन् ।
कोठामा पुगेर सबैभन्दा पहिले फेसबूक खोल्छन । सामाजिक सञ्जालमा देखेका कमसल समाचारहरु पढ्छन । भिडियो हेर्छन् । यिनै कुराहरु पढेर, हेरेर देशको राजनीति प्रति धारणा बनाउँछन् । धारणा मात्र बनाएर पुग्दैन । विश्वाश गर्छन र नेतालाई गाली गर्छन् । समाचार सत्य हो हैन फ्याक्ट चेक गर्ने तरिका पनि थाहा छैन, शेयर गर्छन् र त्यस्तै समाचार तथा भिडियोहरुलाई ‘भाईरल’ बनाउँछन् । बिशेषगरी उनीहरु सामाजिक सञ्जालमा शेयर भएका लिंकमा देखिएका शिर्षकबाटै सबै बुझ्छन । धेरैले त खोलेर पनि पढ्दैनन् ।
दिउँसो ब्रेक टाइममा पनि समाचार पढ्छन् । चर्का चर्का देश भक्तीका गाथा सुन्ने बित्तिकै देशप्रेमले भुतुक्कै हुन्छन् । अनि बिदेशबाटै देश बचाउन खबरदारी गर्छन् । यही सामाजिक सञ्जालबाटै कसैलाई ‘भाईरल’ भगवान बनाउँछन् त कसैलाई ‘भाईरल’ राक्षस । बिदेशमा रहेका अधिकाँशको दिनचर्या आजकल यस्तै हुन्छ ।
विश्वमा सुचना प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै मुख मुखमा झुण्डिएको नयाँ शब्द ‘भाईरल’ हो । भाईरल भनेको के हो त ? अङ्रेजी शब्दमा भाईरल हुनु चाँही भाईरस (जिवाणु) लाग्नु भन्ने अर्थ हुन्छ । जसले गर्दा कुनै पनि बिमारका लक्षणहरु छिट्टै अर्को ब्यक्तिमा सर्न सक्छ । साधारण जनजिब्रोको भाषामा भने भाईरल हुनु भनेको सबैले थाहा पाउनु, चिन्नु, जिब्रोमा झुण्डिनु, धेरै लोकप्रिय वा अतिधेरै अलोकप्रिय हुनु नै हो । अझ सामाजिक सञ्जालमा जति बढी मान्छेले हेरे वा शेयर गरे, चर्चा गरे वा गाली गरे भने पक्का भाईरल भईयो ।
आजकल नेपालमा हरेक दिन कुनै न कुनै नयाँ नयाँ समाचार वा घटना भाईरल हुने गरेका छन् । गीत संगीतमा ट्रेन्डिङमा रहने प्रचलनलाई तोद्डै खबरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाईरल हुने गरेको छ । ति भाईरल खवर, समाचार वा घटनाक्रमलाई ‘काण्ड’ उपमा दिएर बोल्न झनै सजिलो बनाउने गरिएको छ ।
वाईडबडी काण्ड, निर्मला हत्या काण्ड, रबी काण्ड, महरा काण्ड, कालापानी लिपुलेक, एमसीसी काण्ड, आस्था राउत काण्ड आदि इत्यादि नेपालमा भाईरल भएका पछिल्ला काण्डहरु हुन् । यी सँगसँगै यौन क्लिप्सका जापान काण्ड, अष्ट्रेलिया काण्ड, मलेसिया काण्ड, कोरिया काण्ड आदि पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाईरल भएका काण्ड हुन् । यी काण्डहरु भाईरल हुनुमा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको ठुलो ‘योगदान’ छ । त्यसैले उनीहरु धन्य छन् ।
आखिर काण्डहरु किन भाईरल हुन्छन् ? कसले किन भाईरल गराउँछन् ? भाईरल हुनु ठीक कि बेठिक ? भाईरलले फाईदा कि बेफाईदा ? आदि जिज्ञासा उठ्न थालेका छन् । यिनै बारे चर्चा गरौ ।
नेपालमा ईन्टरनेट चलाऊने, चलाऊन जान्ने नेपालीको संख्या कति होला ? सन् २०१० मा १० प्रतिशत भन्दा कम नेपालीको पहुँच ईन्टरनेटमा थियो । सन् २०१९ मा आईपुग्दा सो संख्या बढेर ६० प्रतिशत भन्दा धेरै भएको अनुमान छ । अर्थात अनुमानित ३ करोड २५ लाख जनसंख्या रहेको हाम्रो देशमा २ करोड भन्दा बढीले कुनै न कुनै रुपमा धेरथोर ईन्टरनेटको उपभोग गर्ने गरेको पाईन्छ । यसको अर्थ नेपाली भाईरलका भाईरस यिनै २ करोड हुन भन्ने चाहिं हैन ।
गत बर्ष २०१९ जनवरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा झण्डै १ करोड व्यक्तिले फेसबूक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ति मध्ये ६१ प्रतिशत पुरुष र ३९ प्रतिशत महिला छन् । अर्को तथ्याङक हेर्ने हो भने ३५ ४० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु विदेशमा छन् । खाडी र मलेसियामा मात्रै २० लाख नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा छन् । जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र यूरोपका विभिन्न मुलुकहरुमा नेपालीहरु उल्लेख्य छन् । विदेशमा रहेका ति नेपालीहरु प्रायः सबैको हातहातमा स्मार्ट फोन छ र उनीहरु ईन्टरनेटको उपभोग गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन् ।
हरेक मिडियाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना पाठक बटुल्छन् । भ्यूअर्स बढेसँगै पैसा पनि आम्दानी हुनाले बिकाउ खालका समाचार र भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गरिन्छ । कतिसम्म भने, शिर्षक सनसनीपूर्ण बनायो, भित्र कन्टेन्ट भने अर्कै अंग्रेजीमा विज्ञापन हुन्छ । विदेशमा रहने ४० लाख नेपालीहरु मात्रैले पनि हेरे र शेयर गरे भने पनि ति मिडियाहरु ट्रेन्डिङमा पर्छन । उनीहरुको ब्यापार चलिहाल्छ । यता शेयर गर्नेले आत्मरती लिन्छन्, उता ति हाल्ने मिडियाको चुलोचौको चल्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा भ्युअर्स, लाइक र शेयर धेरै हुनु काण्डहरु भाईरल हुनुका पछिल्ला मापदण्ड हुन् । भाईरल भएकाहरुको अध्ययन गर्दा विशेषगरी सरकार र राजनीतिक ब्यक्तिहरुसँग घटनाक्रमहरु, गीत संगीत, हाँस्यब्यङ्य र कलाकारका ब्यक्तिगत घटनाक्रमहरु, यौनजन्य घटना र क्लिप्सहरु सामाजिक सञ्जालमा भाईरल हुने गरेका छन् ।
तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महराको समाचार सामाजिक सञ्जालमा एकाएक भाईरल भयो जसलाई महरा काण्ड नाम दिईयो । राजनीतिक ब्यक्तित्व भएकोले संसारभरिका नेपालीहरुको चासो हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसमाथि केहि केहिको आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पनि हुने नै भयो । वाइडबडी हवाइजहाज काण्ड पनि भ्रष्टाचारसँग जोडिएको राजनीतिक घटनाक्रम थियो । हरेक देशमा नेपालका ठुला राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु सकृय छन् । ती माथि हरेक नेपाली कुनै न कुनै राजनीतिक विचार नभएको भेटिन्न नै । उनीहरुले पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क गर्ने नै भए । यी समाचारहरु यसरी नै भाईरल बन्छन्, बनाईन्छन् ।
गीत संगीत र हाँस्यब्यङ्य त स्वाभाबिक रुपमा लोकप्रिय हुने नै भए । यसका भ्यूअर्स पनि धेरै नै हुन्छन् । केहि केहि मात्रै भाईरल हुने गर्दछन् । लोकप्रिय भएर धेरै भ्यूअर्स भए पनि केही गीत भने कम भाईरल हुन्छन् । बरु अर्को शब्दमा भन्दा ‘हीट’ भने हुन्छन नै । कलाकारहरुको ब्यक्तिगत घटनाहरु भने एकाएक भाईरल हुने गर्छन् । किनकी आम मान्छेहरुले खोजिने पात्रहरु कलाकार नै हुन् । उनीहरुको ब्यक्तिगत जीवन, विवाह, डिभोर्स र यौन क्लिप्स पाए त विदेशमा बस्नेहरुलाई दसैं आए जस्तै हुन्छ ।
लौ बिदेशमा बस्नेले भाईरल त बनाए । अनि भाईरल बन्ने चाहिं ?
भाईरल हुन मन लाग्नु पनि एक किसिमको क्रोनिक रोग नै हो । मानसिक बिचलन हो । नेपालमा केही समययता केही लेखक, कलाकार र राजनितिज्ञहरुलाई भाईरल हुने रोग लागेको छ । केही लेखकहरुलाई जथाभावी लेख्ने, बोल्ने र नेताहरुलाई गाली गर्ने गरेकोले यूट्युबमा भाईरल हुने मनोरोग पलाएको छ । उनीहरु मनमा जे लाग्यो त्यही बोल्ने गर्छन् । तथ्यहरुको पुष्टी गर्नु परेन, जथाभावी आँकडामा भनिदिन्छन् । जे पायो त्यही आरोप लगाउँछन्, नेपालमा कानून लाग्दैन । पढ्ने र सुन्ने मान्छेहरुलाई साँच्चै पो हो रहेछ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्छन् । पाठकहरुले पत्याइदिन्छन । अनी ती लेखकहरु भाईरल भईदिन्छन् ।
खाडीमा बस्ने नेपालीहरु तिनैका कुरा सुनेर लौ देशमा त बर्बाद नै पो हुन लागेछ भनेर चिन्तित हुन्छन् र नेतालाई सक्दो गाली गर्छन् । नेताले देश बेचे रे, अमेरिकी सेना आउने भए रे, भारतले नेपाल कब्जा गर्न लाग्यो रे भनेर नेपालीहरुको मनमा राष्ट्रभक्ति जाग्छ । उनीहरु ती भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेर बेचिन लागेको हाम्रो देशलाई बचाउन भगीरथ प्रयास गर्छन् । उता मनोरोगले ग्रसित ‘सो कल्ड’ लेखक भाईरल भईदिन्छ ।
त्यसो त सेलिब्रेटी कलाकारहरुले पनि भाईरल हुन अनेक हथकण्डा अपनाउने गरेका छन् । केहिदिन अगाडी बिदेशी टेलिभिजन प्रस्तोताले लाइभ कार्यक्रममै वायु विकार विसर्जन गरिन् । नेपाली मात्र कहाँ हुन् र, भाइरल बनाउने काममा विदेशी पनि कम छैनन् । उक्त क्लिप निक्कै नै भाईरल बन्यो । केही दिन अघि गायक रामकृष्ण ढकाल निक्कै भाईरल भए । उनको नक्कली डिभोर्सको समाचारलाई दर्शकले भाईरल बनाइदिए । अन्ततः उनी आफैंले उक्त समाचार खण्डन गर्नुपर्यो । नेपालमा आफुलाई सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउनेहरु देखि राजनीति गर्नेहरु पनि आफुलाई भाईरल बनाउन मन पराउँछन् ।
के तपाईं पनि भाईरल बन्ने हो ? त्यसो हो भनें लौ माथि भनिए अनुसारकै कुनै उपक्रम गर्नुस् र विदेशमा बस्ने नेपाली तताउनुस् । भाइरल भएर गजक्क पर्ने पालो तपाईकै हो ।
(सापकोटा युएईमा कार्यरत पत्रकार हुन ।)
यो पनि पढ्नुहोस् एनआरएनए, युएईको अध्यक्ष को ?
१० माघ २०७६, शुक्रबार
मलेसियामा निर्धात कुटिएका सुरक्षा गार्डलाई उल्टै फसाउने गरी मुद्धा दायर
धारिलो हतियार प्रहार गरिएको दुई नेपालीको शव भेटिएपछि प्रहरीद्धारा अनुसन्धान सुरु
सरकारी खर्चमा फर्किन २४ सय ५० को आवेदन, विदेशबाट फर्किन चाहनेको संख्या ९३ हजार
विदेशमा अन्यायमा परेर फर्केकाहरुलाई स्वदेश फर्किंदा लागेको खर्च शोधभर्ना दिनुः आयोग
मलेसियामा सुरक्षा गार्ड कुट्ने नेपालीलाई चार महिना जेल सजाय
म सम्भावित कोरोना संक्रमित
दीपक पुडासैनी २३ असार २०७७, मंगलवार
उद्दार उडानको कच्चा निर्णय र उदासिन श्रममन्त्री
देशपरदेश सम्वाददाता, काठमाडौं ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार
‘हाम्रो सुझाव र श्रम मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गराउने अपेक्षा’
जनक चौधरी १६ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार
सिमा विवादः नेपालका लागि चुनौतिसँगै अवशर पनि
विनोद भट्टराई १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार
देश परदेश डटकम
देश परदेश डटकमका लागि प्रकाशक संस्था: ड्रिम मल्टिमिडिया एण्ड रिसर्च सेण्टर प्रा. लि., काठमाडौं
सुचना विभाग दर्ता नम्वर ५७/०७३-७४
कार्यालयः कोटेश्वर, काठमाडौं
सम्पर्क नंः ०१-५०१०५८२
© 2020 देश परदेश / सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By: Mantra Ideas Pvt. Ltd.